To: मान्छे खाने गोठ!
राज सरगम - देउताको विरुद्ध बोल्नु पनि यहाँको बुज्रुकहरुको अपमान गरेसरह हुन्छ। म बाँचेको परिवेशमै धामी, झाँक्री, पण्डित, भगतजस्ता धार्मिकहरुले कहिल्यै महिनावारी भएका महिलाहरुलाई स्वीकारेनन्। सबैभन्दा ठूलो विभेद नै असली धर्मगुरु र पढन्ते शिक्षकहरुले गरे।
देउताको उत्पत्ति कहाँबाट भयो? इसाइ धर्म र बुद्ध धर्ममा छाउ बार्नु पर्दैन भने हिन्दु परिवारमा मात्रै किन? विज्ञानले यसलाई किन स्वीकार्दैन? धर्मको बाटो लाग्ने कि विज्ञानको बाटो? Comments
शोभा शर्मा - सँगै बसेकी काकी तिर हेरेर आमाले ती शिक्षकले थर फेरिदिनुको कारण सुनाउनु भयो, ‘हेर न, छोरीको थर अहिलेनै ‘शर्मा’ राख्यो भने विहे गरेर गएपछि पनि थर फेर्नु पर्दैन भन्दै सरले यसको थर फेरिदिनु भएछ, यसलाई चित्त बुझेन।’ चित्त नबुझेको मात्र हैन, मलाई यस्तो लाग्यो म मेरो परिवारबाट अलग भएँ। मेरो परिवारको पहिचानबाट मलाई कसैले सुटुक्क चुँढेर छुट्याइदियो। रूखबाट बतासले चुँडाएको पात झैँ भएँ म। निरूपाय भएर म कहिले आमाको अनुहार हेर्थेँ।
मानवी पौडेल - पेट्रोलको मूल्य सरकारले नै प्रतिलिटर १०१ रुपैयाँ ५० पैसा तोक्यो। उसै त खुद्रा फिर्ता नदिने प्रवृत्तिमा सरकारले नै ५० पैसा राखेर भाउ तोकेपछि उपभोक्तालाई ठगिनबाट कसले बचाओस्! अब हामीले पेट्रोल पम्पलाई निर्धारित मूल्यअनुसार पैसा तिर्न ५० पैसा कहाँबाट ल्याउने?
- सरगम भट्टराई - संविधानले फालेको दौरा सुरुवाल र टोपीले देश बिगारेकै हो भन्ने तर्क तपाईँ जस्तो बिद्वान मान्छेकै मुखबाट सुन्न पाउँदा बडो दुःख लागेको छ। भाषा, भेष र धर्ममा भेद देखाएरै गरेको राजनीतिले देश थला परिरहँदा कोही त मोटाएका होलान् तर यस्तै बेला नागरिकले स्वत:स्फूर्त रुपमा टोपी लगाएर आफ्नो संस्कृति झल्काउँदा तपाई जस्तो मान्छेले बरु मन नपरे चुप लागेर बसेको भए पनि त हुन्थ्यो नि! भोलि कसैले बख्खु दिवस र धोती दिवस नै मनाए पनि नेपाल भित्रकै पहिचानको प्रचार त हुन्थ्यो नि! यति धेरै शुभचिन्तकको चित्त दुखाएर कसलाई खुशी पार्न खोज्नु भएको हो र काका?
अर्जुन अपवाद - पृथ्वी जयन्ती आउँदैछ। सम्मान गर्ने कि अपमान गर्ने भनेर समाज विभाजित छ। इतिहास गलत थिएन भने उनले काठमाडौं राजधानी सारे। आफ्नै संस्कार संस्कृति स्थानीयमा लाद्ने प्रयास गरेनन्। बरू स्थानीयले वर्षौंदेखि मानेर आएको कुमारी प्रथालाई स्वीकार गरे। तत्कालिन अवस्थामा कुमारीको खुट्टा ढोगे। यसले गर्दा स्थानीय र राजपरिवारको सम्बन्ध सुमधुर भएकै हो।
अन्जना केसी - ‘आमाको याद एकदम धेरै आउँछ, आन्टी! सम्झिँदा रून मन लाग्छ। बितेको कुरा केही सम्झनै मन लाग्दैन। दिउँसो त जसो तसो दिन बित्छ। जब रात पर्छ, तब आमाको न्यानो काखमा खुट्टा च्यापेर निदाउन मन लाग्छ, हामीलाई घर जानै मन लाग्दैन। खाना खाने बेला र सुत्ने बेला धेरै याद आउँछ। निन्द्रा लाग्दैन, निदायो भने सपनामा आमालाई देख्छु, फेरि ब्युझिन्छु। भाई मम्मी वुवु भन्दै रोईरहेको हुन्छ। अनि मलाई पनि रून मन लाग्छ। भाइ सँगै रून्छु मुख बन्द गरेर आवज ननिकालेर! हे भगवान! हामीलाई मात्र किन यस्तो जीन्दगी दियौं? आमालाई त लग्यौ, बाबालाई पनि किन टाढा बनायौ? न आमाको काख न बाबाको साथ! साच्चिकै टुहुरा भयौ हामी। मेरी आमाको कुटिएको रक्ताम्मे शरीर झल्झल्ति याद आउँछ। अनि मेरी आमा मार्ने त्यो मास्टरको मासु काँचै खाऊँ जस्तो लाग्छ आन्टी,’
जीवन क्षेत्री - म सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिनु वा नबाहिरिनुले नेपाली समाजमा ती सञ्जालले खेल्ने भुमिकामा केही फरक नपर्ला तर व्यक्तिका रुपमा मैले कस्ता सामाग्री, सन्देश, बहस वा अन्तक्र्रियाहरुलाई स्वीकार गर्छु वा अपनाउँछु भन्ने कुरालाई चाहिं फरक पार्छ । र आफ्नो व्यक्तित्व विकासका लागि मैले कुन बाटो यात्रा गर्छु भन्ने कुरालाई पनि त्यसले फरक पार्छ। Comments
डा सुबास बस्नेत - नबउदारवादको चरम नसामा समाज मस्त झुमीरहेको छ । नबउदारबादी सासकहरु बेहोशी समाज लाई मस्त लुटिरहेका छन । जब सम्म नबउदारबादका रक्षकहरु राज्यका हर्ताकर्ता रहन्छन्, धेरै गोविन्द केसीहरुले धोका पाइरहन्छन । अबको चुनौती भनेको धेरै गोविन्द केसी जन्म्माउनु मात्र हैन कि तिनीहरुलाई राज्य र समाजको ब्यवस्था र सन्चालन बिधी परिवर्तन गर्न सक्ने तहमा पुराउनु पनि हो । मुख्य कुरा के हाम्रो समाज लाई यो नबउदारबादको पंजा बाट निकालेर अरु धेरै गोविन्द केसीहरु लाई त्यो नेतृत्व तह मा पुराउन सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने हो । Comments
दिनेश खरेल - एकातर्फ सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाले शौचालय निर्माणको लागि व्यापक लगानी गरेका छन् तर लगानीको प्रभाव सकरात्मक छ वा नगकरात्मक छ यसको पनि विश्लेषण हुन जरुरी छ । जनताले आफ्नो चर्पी आफ्नै लागतमा बनाएका छन् । स्थानीय निकाय भने अलि ठाडो र कडा शैलीमा प्रश्तुत भएको देखिन्छ । दबाव दिंदै भनिरहेको छ जनतालाईः एनी हाउ, चर्पी बनाउ
अरुणा उप्रेती - नेपालका कति गाउँमा चर्पी नभएकैले झाडापखाला फैलिएको हामीले देखेका छौं। चर्पी नभएकाले वनजंगल जाँदा जनावरको टोकाइको शिकार भएका उदाहरण पनि हामीसँग छन्। अध्याँरो झाडीभित्र पिसाब गर्न जाँदा बलात्कारको शिकार भएका घटना थुप्रै छन्। हाम्रा मठ–मन्दिरमा चर्पीको अभाव त्यही सिलसिलाको एउटा कडी हो।
डा दिनेश धरेल - यदि तपाईको बच्चालाई झाडापखाला लागेको छ भने चर्को ज्वरो आउने, दिशामा रगत देखिने, साह्रो गरी पेट दुख्ने, कम्पन आउने, बेहोस हुने, दुध चुस्न वा केही पनि खान नसक्ने, पिसाब कम हुने, तारन्तार उल्टी हुने, पेट फुल्ने जस्ता गम्भीर समस्याहरु देखिएको छ भने अस्पताल लैजानु र डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ।
डा.अभिषेक राज सिंह - यती सम्म कि राति डिउटी पर्ने इन्टर्न डाक्टर र रेजिडेन्ट डक्टरलाई बस्ने प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई हुँदैनथ्यो। अनि रेजिडेन्ट डाक्टरलाई विद्यार्थीभन्दा बढी कामदारको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। यतिसम्म हुन्थ्यो कि मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको सिट संख्यामा वृद्धि हुनासाथ कर्मचारीको बिभिन्न मागहरु प्रश्तुत हुन्थे तर विद्यार्थीहरुको कुनै पनि माग सम्बोधन हुँदैनथ्यो ।
जीवन क्षेत्री - मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने वा सीट बढाइदिने शर्तबन्दीमा पदाधिकारी आउने र संस्थालाई अझ अराजकतातिर धकेल्दै पहिलेकै चर्तिकला दोहोर्‍याउने हो भने अब आफूले नियमन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रसित बिकिसकेको केयूको मेडिसिन संकाय खारेज हुने दिशातिर जानेछ । सरकार र उसका निकायहरु जति नालायक र निकम्मा भए पनि नागरिकहरुसित कम्तीमा यस्तो घोटाला गरेर डाक्टर बन्ने, बनाउनेहरुलाई सामुहिक बहिष्कार गर्न जहिले पनि सक्षम हुन्छन् । मेरो विचारमा अनाहक स्वास्थ्य र ज्यान गुमाउनुभन्दा त्यस खालको नागरिक प्रतिरोध गर्नु धेरै राम्रो कुरा हो।
गिरीश गिरी - यसरी दिन प्रतिदिन बढ्दो लोकप्रियतासँगै यो टेडएक्स इभेन्ट अब उत्तरी अमेरिकाबाट फरक स्थानहरुमा विस्तार हुँदै गइरहेको छ। र, टेडसँग लाइसेन्स लिएर स्वतन्त्र रुपले ‘टेडएक्स’ विश्वका कुना कुनामा आयोजना हुन थालिसकेका छन्। नेपालमा यसरी टेडको लाइसेन्स दस जनाले पाइसकेको देखिन्छ। तीमध्ये आठजना काठमाडौंकै छन् भने दुईजना नारायणघाट र वीरगन्जका। तीनैमध्ये भारतमा इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका वीरगन्जका ‘लाइसेन्सी’ विनित डालमियाले पहिलोपटक मोफसलमा आयोजना गरेको इभेन्ट थियो ‘टेडएक्स वीरगन्ज’।
सौरभ कार्की - र, बत्ती झ्याप्प निभ्छ। पर्दामा एउटा पुतली विस्तारै उड्दै जान्छ, त्यही पुतली जो राक्षसको प्राण थियो। अँ... राजेन्द्रको किताबमा पनि त पुतली थियो।
र, थियो मन्दिराको पछ्यौरामा पुतली। Comments
लक्ष्मी रौनियार - नामबाट सुरू हुने अन्तर्वार्ता खोइ कता गएर टुंगिन्थ्यो। दिदी लाज मानेर जवाफ दिने गर्थिन्। मन पर्नेदेखि मननपर्ने सबै कुरा सोधिन्थ्यो। घण्टौं चल्थ्यो यो वार्तालाप। यति मात्रै कहाँ हो र, उठेर, हिँडेर समेत देखाउनुपर्थ्यो। हातका औंला र खुट्टाका औंला पनि हेरिन्थ्यो।दिदीको खुट्टामा उम्लेको पानी पोखिएर हल्का सेतो दाग देखिन्थे शंका गरेर कतै चरख हो कि यादेवीदेवताको श्राप भनी डाक्टरलाई चेकअपसम्म गराइन्थ्यो। चेकअप गरेपछि पनि विश्वास नगरी कुराकानी त्यहीँ टुङ्गो लगाएर बाटो लाग्थे।
भानुभक्त - अचेल मलाई हत्तपत्त ओभरटेक मन लाग्दैन। बरू सडकका लाइनमा ध्यान जान्छ। कतै बिचमा छुटेका लाइन, कतै सिधा लाइन, त कतै दुइटा सिधा लाइन। तिनलाई मिच्ने हिम्मत आउँदैन किनकि एकातिर पाँच सय रुपैयाँ अर्कातिर बग्गी खानाको दिनभरीको धुलो। तर धेरै मोटरसाइकलवालाहरू अझै पनि चर्को आवाज निकाल्दै, नागबेली बनाउँदै सडकमा गुडिरहेका हुन्छन्। ‘एकदिन बग्गीखाना जान्छन् अनि यीनले चाल पाउँछन्– लेन भनेको के हो’, सोचेर मनमनै हाँसो उठ्छ।
—भवसागर घिमिरे - यस्तो चल्ति शाखा। त्यो पनि प्राइम लोकेशनमा। यो कुन युगको बैंकमा आएछु भन्दै थकथक लाग्यो। फर्म भरेर लाइनमा ठिंग उभिएको मैले पालो पाउँन ठ्याक्कै २५ मिनेट लाग्यो, १३ जनापछि। तपाई भन्नु होला, तेलको लाईनमा तीन दिन बस्न सक्छस्, ग्याँसको लाइनमा दुई रात खप्न सक्छस्, बैंकको लाइनमा जाबो २५ मिनेट बस्दा तेरो के ढाड खुस्कियो ? हैन मेरो त खुस्केन तर यो बैंकले सन् २०१६ को ‘बैंक अफ द इयर’ पाएको हो भन्ने थाहा पाउनु भयो भने तपाईको चाहि फुस्कन सक्छ, हाँसो।
अभिषेक राज सिंह - हाल आएर मेडिकल क्षेत्रमा किन विद्यार्थीको खडेरी पर्‍यो? यसको कारण खोज्नुको साटो मेडिकल कलेजहरु विद्यार्थीसँग मनपरि शुल्क उठाउने अनि प्रवेश परीक्षामै चिट चोराउनेजस्तो घृणित कार्य गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो समजमा भोलि आउने डाक्टरप्रति कस्तो दृष्टिकोण रहला?
जगदिश पोखरेल - केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको उक्त अप्रिय निर्णयलाई पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सदर गर्नेछ वा बदर गरेर लाखौँलाख जनताको आस्थामा लागेको चोटमा मल्हमपट्टी लगाउनेछ भन्ने कुरा अबको केही दिनमै थाहा हुनेछ।
जीवन क्षेत्री - कानुनी ग्रे एरियामा रहेर गर्न लागिएको भोलिको प्रवेश परीक्षामा सामेल भएर पढ्न उद्यत भाइबहिनीहरु र तिनका अभिभावकलाई एउटा प्रश्नः किन अहिले आएर विद्यार्थीको यस्तो खडेरी परिरहेको छ नेपालका मेडिकल कलेजहरुलाई? (स्मरण रहोस्, विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या यो वर्ष अझ ठूलो अनुपातमा घटेको छ।) अघिल्लो वर्षसम्म हजारौंको संख्यामा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु किन अब परपर भागिरहेका छन्? जुन विश्वविद्यालयले पटापाठन शुरु गर्न छाडेर वर्षभर प्रवेश परीक्षा लिइरहन्छ, त्यसले कस्तो गुणस्तर सुनिश्चित गर्ला? छ वर्षपछि निस्कँदा रोजगारी मिल्नेभन्दा बेरोजगार हुने सम्भावना उच्च भएको अवस्थामा त्यस्तो सन्देहास्पद गुणस्तरको पढाइका लागि राज्यले तोकेको भन्दा निकै चर्को शुल्क तिरेर किन पढ्ने?
अभिषेक राज सिंह - हालका प्रधानमन्त्री त स्वयम् गरिब र निमुखाका हकहितका लागि भनेर लामो लडाइँ लडेर आएका हुन्। तर, उनको ध्यान भने ती क्षेत्रका जनाताका लागि हुन सकेको छैन। बरु उनी आफ्नो सत्ता र शक्तिको भरपुर दुरूपयोग गरेर आफ्ना कार्यकर्ताको इच्छा पूरा गर्न हरसम्भव प्रायसरत छन्। उनलाई यो हतारो किन? सरकारले देशको सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि भनेर चिकित्सा ऐन बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको अवस्थामा हालका प्रधानमन्त्रीको निर्णयले उनको नियतमाथि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ छन्।
शेखर खरेल - ती माइकमा फलाकिने सिनेमाका ऊ पहिलो दर्शक बनिसकेको हुन्थ्यो। गाँठी कुरा के थियो भने, शहरका टाकिजहरूमा चलाइने सिनेमाहरूले एउटा सरकारी खड्गोको अनिवार्य सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसलाई सेन्सर भनिन्थ्यो। सेन्सर पासका लागि अञ्चलाधीश कार्यालयले आफ्ना अधिकारीलाई सिनेमाहल पठाउथ्यो। संयोग चाहिँ, सिनेमा-उन्मादी त्यो फुच्चे बुबाको दौराको फेरो समाउँदै सेन्सरको मौकामा चौका हान्दै सिनेमाको पहिलो दर्शकमा दरिन्थ्यो। उसलाई सेन्सरीय संसारमा डोहोर्‍याउने अर्को जिनिस पनि हुन्थ्यो, सिनेमाका दौरान हल मालिकको चमेनाको सत्कार। सेन्सरको मेनुमा अनिवार्य हुने गर्थ्यो ‘ठण्डा मतलव कोकाकोला’।
रमेश सायन - दामुले मेरो बानीलार्इ निस्तेज पार्न नियोजित तरिकाले मलार्इ पोर्न फिल्म देखायो। सुरुमा त म अतालिएँ। पछि अतालिनु परेन। सुरुमा लजाएँ। पछि लजाउनु परेन। लाज आफैं बाफझैं उड्यो। म पानी भएँ। समुद्रमा डुबेको फलामको टुक्रोजसरी फिल्ममा गहिरीँदै जान्छु।
भानु बोखिम - ‘त हिरोइनलाई जंगलको रास्तामा गुन्डाहरुले लखेटिरहेको हुन्छ’ भगत आफ्नै शैलीमा फिलिमको कथा सुनाउँथ्यो, ‘चट्ट हिरोइनको साडी तान्दै, भिलेनले भन्छ, मुझसे कैसे बचोगी रे छोकरी?’
बेनुप भट्टराई - मानौं यस्तो भइदियोस्,‘अरु २०/३० वर्ष बचाइदिन्छु, के गर्छस्?’उनको उत्तर पक्कै त्यही हुन्थ्यो, ‘पत्रकारितै गर्छु।’ र, अझ यो पनि छुट्दैनथ्यो, ‘मेरै जिल्ला झापामै बसेर।’
जीवन क्षेत्री - ‘थ्री इडियट्स’ चलचित्रमा अमिर खानको विख्यात संवाद छः यदि सचिन तेन्दुलकरलाई गायक बन्न बाध्य पारिन्थ्यो वा लता मंगेशकरलाई फास्ट बलर बन्न बाध्य पारिन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? शायद रामकण्ठ मकाजूको उदाहरणीय चिकित्सकीय करिअर हेरेर विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउनु लता मंगेशकरलाई फास्ट बलर बनाएर मैदानमा पठाउनुजस्तै थियो।
डा. अभिषेकराज सिंह - यदि तपाईंले साँच्चिकै गाउँ–गाउँमा पुर्याउन खोज्नु भएकै हो भने दीर्घकालीन निर्णय लिनुहोस्। देशलाई चाहिने डाक्टरको संख्या निकाल्नुहोस् अनि लोक सेवाबाट दरखास्त माग्नुहोस्। तपाईंले मागेजति डाक्टर आउनेछन तर एक वर्षे बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरी अल्पकालीन निर्णय भने नलिनुहोस्।
मधुसूदन पौडेल - ५ नम्बर प्रदेशको निर्णयमा यहाँका मधेश वा पहाड कुन ठाउँबाट विरोध आयो ? गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङ्जा त पहाडी जिल्ला भए रे, के रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया मधेशका जिल्लावासीले यसप्रति असहमत जनाएका थिए ? उनीहरु विरोधमा उत्रिएका थिए ? जब यस भेगका पहाडी, मधेशी, जनजाति, थारु सबै मिलेर ५ नम्बर प्रदेशलाई सुन्दर प्रदेश बनाउने सपना बुन्दै थिए, बालुवाटारमा किन यो प्रदेशलाई भत्काउने निर्णय गर्नुभयो? लोकतन्त्रमा नागरिकको कुनै अस्तित्व छैन ? यदि छ र हुन्छ भने ५ नम्बर प्रदेशको कुन पहाडी, कुन मधेशी, कुन मगर, कुन दलित वा कुन थारुले सीमांकन परिवर्तन गरिदिनुस् भनेको थियो? कृपया जवाफ दिनुहोला।
डा. दिनेश धरेल - दु:खको कुरा यस्तो भयावह रुपमा फैलिरहेको डेङ्गु संक्रमण रोक्ने खोप आजसम्म पनि उपलब्ध छैन। केही देशहरूमा उपलब्ध हुन थाले पनि ती खोप परीक्षणका सबै चरण पार गरेर नेपाली बच्चाहरूको पहुँचमा आइपुग्न अझै केही वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ।